Black Friday kwụ n'ahịrị | Esi m mac
Kwụ n'ahịrị na ụfọdụ ụlọ ọrụ US maka Black Friday
Otu ụbọchị mgbe Ekele na United States, ndị kasị jiri obi ha niile na-enye onyinye maka ndị ama ama Black Friday a kụrụ ha n’ụtụtụ n’ụlọ ahịa teknụzụ mba ka ha bụrụ ndị izizi ga-abanye na ha wee nweta ahịa kacha mma.
O doro anya na nke a nwere ike ichetara anyị banyere ahịrị ndị ahụ emere ma echere m na a ka na-eme taa maka ire na Spain ma ọ bụ yiri na mba ndị ọzọ. Agbanyeghị, ọ bụghị ndị ọrụ niile sonyeere kwụ n'ahịrị, ma pere mpe ịnwe ịntanetị na aka anyị.
Ndị kwụ n'ahịrị abụghị nsogbu maka ụlọ ahịa, ihe dị iche na nke ahụ, ebe ha na-echere ndị ahịa mbụ bụ ndị nwere oke ọkụ iji nweta onyinye kacha mma na ụlọ ahịa ahụ. O doro anya na ezigbo ahịa mkpọsa na-arụ ọrụ dị oke mkpa na nke a niile na enweghị mgbagha, ụlọ ahịa na ọkachasị nnukwu ụlọ ahịa mara usoro iji soro nke ọma. N'ihe banyere Spain, Black Friday abatala n'ike ma onye ọ bụla na-esonye na bandwagon nke onyinye, mana n'ọnọdụ m ahụbeghị m kwụ n'ahịrị na nnukwu ụlọ ahịa iji banye nke mbụ.
Ọ bụ nnọọ eziokwu na ụlọ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa na United States, mba ebe ụbọchị mbenata ego a bụ ọdịnala gbanyeworo mkpọrọgwụ, enweela ike mbupụ echiche a na mba ndị ọzọ ejiriwo obi ụtọ nabata ya n'oge ndị a. Ile ezi anya na ịzụrụ ihe anyị na-eche kemgbe ogologo oge nwere ike ịbụ ntakịrị ọnụ ala taa maka onye ọrụ, mana ka anyị ghara ịla ara ma na-agagharị na ọnụahịa n'ọtụtụ ebe tupu ịmalite ịzụrụ ihe nwere ike ịbụ ndụmọdụ amamihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Kwụ n'ahịrị na ụfọdụ ụlọ ọrụ US maka Black Friday
desktọọpụ n'efu maka obere oge
Apple kacha mma Black Friday na-emekọ na Rossellimac